जापानी ओन्सेन विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरूको लागि सिफारिस गरिएको - Best of Japan
जापानी महिला खुला खुला तातो onsen बाथमा = शटरस्टक
जापान धेरै ज्वालामुखीहरु भएको देश भएकोले, ज्वालामुखीको म्याग्माले भूगर्भीय पानी तताएको छ, ओन्सेन (तातो स्प्रि )्ग्स) यहाँ र त्यहाँ बाहिर स्प्रि .्ग गर्दछ। हाल, भनिन्छ जापानमा 3000००० भन्दा बढी स्पा क्षेत्रहरू छन्। ती मध्ये धेरै विदेशी पर्यटकहरु बीच लोकप्रिय छन्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई उत्तरबाट क्रमशः जापानमा सबैभन्दा राम्रो तातो स्प्रि introduce्गहरू परिचय गर्दछु। प्रत्येक तातो वसन्त क्षेत्र को नक्शा मा क्लिक गर्नुहोस्, गुगल नक्शा एक अलग पृष्ठ मा प्रदर्शित हुनेछ।
तलको भिडियो बप्पू ओन्सेन हो। बेप्पू ओन्सेनमा स्टीमको विशाल रकम सुन्दरताले बढ्दैछ।
डिसेम्बर देखि मार्च सम्म, तपाईं हिउँदको दृश्यबाट तातो वसन्तको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। जापानीहरूले यसलाई "युकिमि-बुरो" भन्छन् (雪見 風 呂 = हिउँ देख्दा नुहाउँदै)। यहाँ पाँच क्षेत्रका ओन्सेनको फोटोहरू छन्। (१) टकारागवा ओन्सेन (गुन्मा प्रान्त), (२) ओकुहिदा ओन्सेन्गो (गिफु प्रान्त), ()) जाओ ओन्सेन (यामगाता प्रान्त), ()) जिन्जान ओन्सेन ...
न्युटो ओन्सेन (अकिता प्रान्त)
जिन्जान ओन्सेन (यामागाता प्रान्त)
कुसात्सु ओन्सेन (गुन्मा प्रान्त)
Hakone (कानगावा प्रान्त)
Okuhida Onsengo (Gifu प्रान्त)
एरिमा ओन्सेन (ह्योगो प्रान्त)
किनोसाकी ओन्सेन (ह्योगो प्रान्त)
बेप्पू ओन्सेन (ओइटा प्रान्त)
युफुइन ओन्सेन (ओइटा प्रान्त)
कुरोकावा ओन्सेन (कुमामोटो प्रान्त)
टोया शहर बाट टोया ताल (टोयको) बाट होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
टोयोको ओन्सेनको नक्शा
टोया ताल जापानको नौौं सबैभन्दा ठूलो ताल होक्काइडोको दक्षिणपश्चिमी भागमा अवस्थित छ। यो ताल लगभग गोलाकार, करिब ११ किलोमिटर पूर्व र पश्चिम, kilometers किलोमिटर उत्तर र दक्षिणमा रहेको छ। टोयोको ओन्सेन (ताल तोया ओन्सेन) यस तालको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ। त्यहाँ धेरै तुलनात्मक रूपमा ठूला होटेलहरू छन्। पाहुना कोठाबाट तपाई टोया ताललाई हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं तालमा डु boats्गा खेल्न सक्नुहुन्छ।
द विन्डसर होटल टोया रिसोर्ट र स्पा भनिने लक्जरी होटल स्पा शहरको ठीक बाहिर अवस्थित छ। यस होटलमा, G8 शिखर सम्मेलन २०० 2008 मा भएको थियो। टोयको यस शिखर सम्मेलनमा प्रसिद्ध भयो। विन्डसर होटल टोया रिसोर्ट र स्पा एक होटलको रूपमा प्रख्यात भएको छ शिखर सम्मेलन भएको थियो। यो होटेलमा फ्रान्सेली रेष्टुरेन्टहरू पनि छन् जसले मिशेलिन गाइडमा stars स्टारहरू जितेका छन्। तातो वसन्त सुविधाहरू पनि अद्भुत छन्। यदि तपाईं एक आरामदायक होटलमा तातो वसन्तको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो होटेल छनौट हुनेछ।
>> टोयोको ओन्सेनको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
नोबोरिबेत्सु, जापान तातो स्प्रि town्ग टाउन स्काईलाइन = शटरस्टक
Nooribetsu Onsen को नक्शा
होक्काइडोमा सबैभन्दा सिफारिश गरिएको तातो स्प्रि Nob्ग हो नोबोरिबेट्सु ओन्सेन (登 別 温泉)। यो १ घण्टा १० मिनेट JR सीमित एक्सप्रेस द्वारा सप्पोरो बाट छ। तातो वसन्त शहर नजिक, तपाईं यस पृष्ठमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ craters को एक समूह छ Jigokudani (地獄 谷)। Jigokudani तातो को स्रोत छ ...
यदि मैले होक्काइडोको तातो स्प्रि amongहरूको बीचमा उत्कृष्ट choose छनौट गरें भने, तेस्रो स्थान युनोकावा ओन्सेन (हाकोडाटे) छ, दोस्रो टोयको ओन्सेन हो, र पहिलो स्थान नोबोरिबेत्सु ओन्सेन हो।
नोबोरिबेत्सु ओन्सेन जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय तातो स्प्रि .्ग हो। करीव १० प्रकारका तातो स्प्रि .हरू प्रति मिनेट 10००० लिटर सम्म घसिरहेका छन्। किनकि तपाईं विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि enjoyहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ, नोबोरिबेत्सु ओन्सेनलाई "तातो स्प्रि of्ग्सको डिपार्टमेन्ट स्टोर" भनिन्छ। त्यहाँ धेरै पिच्ड होटेलहरू छन्, जस मध्ये केहीमा विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि .हरू उपलब्ध छन्। तातो वसन्त शहरबाट केही छोटो पैदल यात्रा गर्दा, त्यहाँ एउटा क्रेटर छ जसलाई "जिगोकोदानी (नरकको उपत्यका)" भनिन्छ। यहाँ एक प्रोमेनेड सेट अप गरिएको छ। सल्फर बहावाहरूको गन्ध, त्यहाँ शक्ति छ।
नोप्राइबेट्सु ओन्सेन १ घण्टाको बसको माध्यमबाट नयाँ Chitose एयरपोर्ट बाट छ। यो साप्पोरोको तुलनात्मक रूपमा नजिक छ, त्यसैले म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि यो होक्काइडोको तपाईंको यात्रा कार्यक्रममा थप गर्नुहोस्।
नोबरीबेट्सु ओन्सेनको आधिकारिक वेबसाइट तल छ। यद्यपि यो जापानी भाषामा लेखिएको साइट हो, जब तपाईं अंग्रेजी जस्तो भाषा चयन गर्नुहुन्छ, प्रदर्शित भाषा परिवर्तन हुनेछ।
>> नोबरीबेट्सु ओन्सेनको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
त्सुरुनोय र्योकन, न्युटो ओन्सेन, अकिता, जापान = शटरस्टक
न्युटो ओन्सेनको नक्शा
न्युटो ओन्सेन उत्तरी होन्शुको पहाडहरूमा अवस्थित छ। यो जेआर अकिता शिन्कन्सेनको ताजावाको स्टेशनबाट 50० मिनेट बसमा अवस्थित छ। यहाँ कुनै स्पा शहर छैन। स्वतन्त्र र्योकन (जापानी शैलीको होटल) पहाडमा छरिएको छ। प्रत्येक र्योकन पुरानो परम्परागत जापानी घर हो र ती आउटडोर स्नानहरू अद्भुत छन्। म न्युटो ओन्सेन बीचमा "Tsurunoyu" को बाहिरी स्नानमा प्रवेश गर्न दृढताका साथ सिफारिस गर्दछु। यो Ryokan टोकुगावा शोगुनेट युगबाट पुरानो आवास सुविधा हो। जब तपाईं त्यो बाहिरी स्नानमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईं सेतो तातो स्प्रि by् द्वारा प्रभावित हुनुहुनेछ जुन तपाईंको खुट्टाबाट उठ्दछ।
यदि तपाईं न्युटो ओन्सेनमा जानुभयो भने, तपाईंले जापानमा गहिरो गरीएको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईं जापानको बुढ्यौलीमा फसेको भावनामा फस्न सक्नुहुन्छ। जाडोमा, तपाईं एक रमाइलो हिउँ दृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं ओन्सेनको आनन्द लिनको लागि शान्त बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भने, म पहिले अकिता प्रान्तमा नुयूतो ओन्सेनलाई सिफारिश गर्दछु। न्युटो ओन्सेनमध्ये, यस पृष्ठमा रहेको ससुरुनोय विशेष रूपमा विदेशबाट आएका पर्यटकहरूले उच्च मूल्या .्कन गरेका छन्। Tsurunoyu एक onsen हो कि मा अकिता कुलको सामन्ती शासकहरु द्वारा प्रयोग गरीएको थियो ...
>> कृपया न्युटो ओन्सेन आदिको बारेमा यस साइट हेर्नुहोस्।
जिन्जान ओन्सेन, नुयूतो ओन्सेन जस्तै उत्तरी होन्शुको पहाडहरूमा अवस्थित छ। किनकि यो एकदम हिउँ भएको क्षेत्र हो, यदि तपाईं जाडोमा जानुहुन्छ भने तपाईं जापानमा तातो स्प्रि experience मात्र अनुभव गर्न सक्नुहुन्न, तर हिउँको दृश्यको पनि पर्याप्त आनन्द लिनुहोस्। न्युटो ओन्सेन स्पा शहर होइन, तर स्वतन्त्र र्योकन तितरबितर छ। न्युटो ओन्सेनमा तपाई जापानमा प्रकृतिले भरिएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, जिन्जान ओन्सेन एक स्पा शहर हो जहाँ र्योकानहरू भेला भएका थिए। यहाँ तपाईं पुरानो स्पा शहर को उदासीन वातावरण को मजा लिन सक्नुहुन्छ। जिन्जान ओन्सेनका लागि, मैले निम्न लेखहरूमा यो पनि परिचय दिएँ, यदि कृपया आपत्ति छैन भने कृपया कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाईं हिउँ परेको ठाउँमा ओन्सेन जान चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई यामगाता प्रान्तमा जिन्जान ओन्सेन सिफारिस गर्दछु। जिन्जान ओन्सेन एक रेट्रो तातो वसन्त शहर हो जुन जापानी टिभी ड्रामा "ओशिन" को सेटिंगको रूपमा पनि चिनिन्छ। गिन्जान नदीको दुबै किनाराहरू, जुन एक शाखा हो ...
>> कृपया जिन्जान ओन्सेनको बारेमा यो साइट हेर्नुहोस्
यो स्थान शहरको प्राकृतिक तातो स्प्रि center्ग्स केन्द्र हो जुन "युबाटाके" भनिन्छ, गुन्मा प्रान्त जापानमा कुसात्सु ओन्सेन। रातको दृश्य = शटरस्टक
कुसात्सु ओन्सेन रिसोर्ट टोकियोको १ 190 ० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा अवस्थित छ। यो एक ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट हो जसले जापानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो धेरै पहिलेदेखि चिकित्सा उपचारको लागि प्रयोग गरिएको छ।
कुसात्सु ओन्सेनमा, ,२,32,300०० लिटर भन्दा बढी तातो स्प्रि .हरू बाहिर निस्किरहेका छन्। ओन्सेन शहरको बीचमा तातो पानीको स्रोत "युबाटाके" (तातो पानी क्षेत्र) भनिन्छ। दृश्य जहाँ धेरै तातो वसन्त पानी बाहिर निस्किन्छ धेरै शक्तिशाली छ। Kusatsu Onsen को तातो पानी को तापमान degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी भएकोले, एक पटक चिसो पछि गरम वसन्त को पानी प्रयोग गर्नुहोस्। एकल स्नानगृहमा, विगतमा उनीहरूले काठको थालको साथ तातो पानी उडाए र पानी चिस्याए। अहिले पनि पर्यटकहरूको लागि, किमोनो महिलाहरूले काठको बोर्डहरू लगाएर तातो पानी खन्याउनको लागि एक कार्यक्रम भेला गर्छन्।
Yubatake वरपर धेरै ठूला होटलहरू छन्। त्यहाँ नजिकै विशाल स्की रिसोर्ट छ। जाडो मा स्कीइ and र स्नोबोर्डिंगको मजा लिए पछि तातो वसन्तमा धेरै पर्यटकहरू प्रवेश गरिरहेका छन्।
>> कुसात्सु ओन्सेनको आधिकारिक साइट यहाँ छ
ओवाकुदनी भूगर्भीय उपत्यका हो जुन सक्रिय सल्फर भेन्ट्स र हाकोने = शटरस्टकमा तातो स्प्रि .हरूको साथ छ
Hakone को नक्शा
हाकोन एक हिमाली क्षेत्र हो जुन टोकियोको १०० किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। पश्चिम तर्फ माउंट फुजी छ। त्यहाँ धेरै रायोकन (जापानी शैलीको होटल) र होटलहरू सबै यस पर्वतीय क्षेत्रमा छन्। किनकि टोकियोबाट रेलमा आउन सजिलो छ, धेरै पर्यटकहरूको भीडले भइरहेको छ।
Hakone सुन्दर पहाडहरु र तालहरु को साथ एक रिसोर्ट छ। यदि तपाईं हाकोनेको होटेलमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं हिउँदको स्प्रि enterमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं पहाड दृश्यको मजा लिनुहुन्छ। Hakone मा धेरै होटेल बाहिर आउटडा स्नान तयार छन्। र्योकन र होटेलको बाहेक, त्यहाँ तातो स्प्रि toहरूमा समर्पित सुविधाहरू छन् ताकि तपाईं एक दिन यात्रामा टोकियोबाट हाकोने हट स्प्रि forको लागि जान सक्नुहुनेछ।
Hakone को प्रवेशद्वार Odakyu लाइन को Hakone Yumoto स्टेशन हो। यस स्टेशनको वरिपरि तातो वसन्त सुविधाहरू भएको धेरै होटलहरू छन्, तर हाकोने यमोटो स्टेशनबाट म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं पहाडी क्षेत्रको शीर्षमा ट्रेन (हाकोने तोजान रेलवे) र केबल कार चढ्नुहोस्। केबल कारको टर्मिनल स्टेशनबाट, तपाईं एक रोपवे लिन सक्नुहुनेछ सुन्दर ताल अशिनोकोमा। रोपवे माथिको फोटोमा ओवाकुदनी भनिने क्रेटरको नजिक जान्छ। तपाईं पनि यो क्रेटर वरिपरि एक पैदल लिन सक्नुहुन्छ। किनकि यस हिमाली क्षेत्रमा विभिन्न स्थानहरूमा होटलहरू छन्, सबै प्रकारले, कृपया राम्रो प्रतिष्ठा भएको होटल खोज्न प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाईं टोकियो मा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं नजिकको तातो वसन्त रिसोर्ट क्षेत्र किन रोकिनुहुन्न? टोकियोको वरिपरि, त्यहाँ तातो वसन्त रिसोर्ट क्षेत्रहरू छन् जस्तै जापानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हाकोने र निक्को। म अक्सर हाकोनमा जान्छु। एक घमाइलो दिनमा हाकोनेबाट देखिएको माउन्ट फुजी साँच्चै सुन्दर छ! कृपया ...
>> Hakone को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
जापानी खुला एयर हट स्पा onsen माउन्टेन फुजी = शटरस्टकको दृश्यको साथ
कावागुचिको ओन्सेनको नक्शा
कावागुचिको ओन्सेन माउन्टको उत्तरी भागमा कावागुचिको तालको वरिपरि छरिएका तातो स्प्रि forहरूको लागि सामान्य शब्द हो। फुजी कावागुचिको ताल २० किलोमिटर / गोदमा रहेको सुन्दर ताल हो, र माउन्ट। फुजी तालको किनारबाट राम्रोसँग देख्न सकिन्छ।
१ 1990 XNUMX ० को दशकदेखि कावागुचिको तालको वरिपरि तातो स्प्रि withहरू भएको होटलहरू खुले। त्यसो भए, कावागुचिको ओन्सेन जापानमा राम्ररी परिचित छैन। माउन्ट नजिक तातो स्प्रि ofहरूको कुरा गर्दै फुजी, धेरै जापानी सहयोगी हाकोने वा अतामीसँग। यद्यपि कावासागुशीको ओन्सेन माउन्टसँग धेरै नजिक छ। फुजी र तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। Fuji राम्रो। यस कारणले, यो जापान आउने विदेशी पर्यटकहरु बीच प्रसिद्ध भयो र धेरै विदेशीहरु को भीड छ।
कावागुचिको ओन्सेन तातो स्प्रि with्गहरू भएका होटलहरूको लागि सामान्य शब्द हो, तर यसमा स्पा शहर छैन। त्यसोभए, यदि तपाईं कावागुचिको ओन्सेनमा जान चाहानुहुन्छ भने कृपया कुन होटेल राम्रो हो छनौट गर्नुहोस्। केही होटलहरूको व्यक्तिगत कोठामा स्प्रि। हुन्छ। तपाईं आफ्नो कोठाको तातो स्प्रि fromबाट सुन्दर माउन्ट फुजी हेर्न सक्नुहुन्छ।
हिरायू ओन्सेन, ताकायामा, जापान = शटरस्टक
Okuhida Onsengo को नक्शा
गिफु प्रान्तको उत्तरी भागको पर्वतीय क्षेत्रलाई लामो समयदेखि "हिडा" भनिन्छ। हिडा जापानको नागोनो प्रान्तको साथ सबैभन्दा हिमाली क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा धेरै तातो स्प्रि .हरू छन्। हिदा मध्ये, विशेष गरी आउटब्याक "Okuhida" (पछाडि हिडा) भनिन्छ। Okuhida मा तातो स्प्रि villages्ग गाउँहरु "Oku Hida Onsengo" भनिएको छ।
Okuhida Onsengo हिरेयू, फुकुजी, शिन-हिरायु, तोचियो र होडाका पाँच तातो वसन्त गाउँहरूको लागि सामान्य नाम हो। Okuhida Onsengo ओन्सेन मन पराउनेहरू बीच प्रसिद्ध छ किनकि त्यहाँ प्रकृतिले घेरिएका अद्भुत बाहिरी स्नानगृहहरू छन्
हालसालै, जेआर टाकयामा स्टेशन वरपरको तातो वसन्त क्षेत्रहरू बढि "हिदा ताकायामा ओन्सेन" भनिन्छ। हिडाटक्यामा ओन्सेन विदेशी पर्यटकहरू बीच लोकप्रिय छ। कारण यो छ कि टाकायामा पारम्परिक सुन्दर शहर हो र प्रसिद्ध शिराकावागोमा जान यो सुविधाजनक स्थान हो। धेरै पर्यटक टाकायामा स्टेशन वरपर होटेलमा बस्छन्। जे होस्, Okuhida Onsengo तातो स्प्रि ofको राम्रो गुण हो। यदि तपाईं वास्तवमै अद्भुत Onsen अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ, कृपया Okuhida Onsengo मा जानुहोस्।
>> Okuhida Onsengo को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
म Gifu प्रान्तबाट हुँ, त्यसैले म प्रायः यस क्षेत्रमा जान्छु। Okuhida Onsengo बाहेक, म तपाईंलाई Gero Onsen सिफारिश गर्दछु। Gero हट वसन्त JR Gero स्टेशन को वरपर अवस्थित छ। यो स्टेशन Takayama स्टेशन को दक्षिण हो। गीरो ओन्सेनमा तातो स्प्रि of्गको गुणस्तर अद्भुत छ र यो सहज रूपमा नागोया स्टेशन नजिक छ।
>> गीरो ओन्सेनको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
Arima Onsen को नक्शा
अरिमा ओन्सेन तातो वसन्त हो जसले पश्चिम जापानको प्रतिनिधित्व गर्दछ। ओसाकाबाट रेलमा लगभग एक घण्टा भएको छ। अरिमा ओन्सेनलाई जापानको सबैभन्दा पुरानो तातो स्प्रि spring भनिन्छ। लोहा सहित धेरै रातो तातो स्प्रि this्गहरू यस स्पा शहरमा स्प्रि .्ग हुँदै छन्। यस बाहेक, रंगहीन तातो स्प्रि also पनि घुमाउरो छ। त्यहाँ करीव 30० विविध होटलहरू छन्, त्यसैले यदि तपाईं ओसाका जानुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो यात्रामा अरिमा ओन्सेन थप्न सक्नुहुन्छ।
अरिमा ओन्सेन पहाड "रोकोकोसन" को उत्तर तर्फ अवस्थित छ जुन ओसाका खाडीको उत्तरी तटमा अवस्थित छ। यदि तपाईं अरिमा ओन्सेनमा जानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई रोक्कोसनबाट सुरु गरेर रोक्कोसनबाट अरिमा ओन्सेन रोपवेमा जान सिफारिस गर्दछु। रोक्कोसनबाट तपाई ओसाका र कोबेको विचार हेर्न सक्नुहुन्छ। पहाडहरूको दृश्य तपाईले रोपवेबाट देख्नु पनि आश्चर्यजनक सुन्दर छ। म कोबे शहरमा बस्न्थें, जुन रोकोसनको दक्षिणमा अवस्थित छ। म अक्सर छुट्टिमा एक दिन आफ्नो परिवारसँग रोक्कोसन जान्छु र ओसाका खाडीको दृश्यबाट आनन्द लिन्छु। र म प्राय: रोपवेमा जान्थें। ओसाका र कोबेमा बस्ने जापानीहरूका लागि यो कोर्स धेरै परिचित मार्ग हो। तपाईंले यो कोर्समा तातो स्प्रि experienहरू अनुभव गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। विवरणका लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
>> अरिमा ओन्सेनको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
किनोसाकी ओन्सेनको नक्शा
किनोसाकी ओन्सेन जापान सागर छेउमा रहेको ऐतिहासिक स्पा शहर हो। किनकि यो जापानको सागरको छेउमा अवस्थित छ, जाडोमा जापानको सागरबाट ओसिलो हावाले धेरै हिउँ पर्दछ। तसर्थ, यदि तपाइँ जाडोमा किनोसाकी तातो स्प्रि toमा जानुहुन्छ भने, तपाईं हिउँको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं हिम दृश्य देख्न सक्नुहुन्न भने तपाईं निराश हुनु पर्दैन। किनोसाकी ओन्सेनमा तपाई हिउँदमा धेरै स्वादिष्ट केकाहरू खान सक्नुहुन्छ। किनोसाकी ओन्सेन तातो स्प्रि forको लागि मात्र होइन तर जाडोमा सुँगुरहरू पनि स्वादिलो ​​बनाउन प्रसिद्ध छ।
किनोसाकी ओन्सेनमा, धेरै रियोकन (जापानी शैलीको होटल) तातो स्प्रि withहरू सहित सानो नदीको वरिपरि पंक्तिबद्ध छन्। दृश्य धेरै स्वादिलो ​​छ। मलाई किनोसाकी ओन्सेनको साँझको दृश्य पनि मनपर्दछ।
थप रूपमा, यस शहरमा त्यहाँ सात आश्चर्यजनक सांप्रदायिक स्नानहरू छन्। यो सांप्रदायिक स्नानबाट हिंड्न र विभिन्न स्नान लिन पर्यटकहरू बीच लोकप्रिय छ। धेरै मानिसहरु "Yukata" भनिने किमोनो लगाई टहलिरहेका छन्। तपाईं आफ्नो Ryokan मा Yukata उधार लिन सक्नुहुन्छ। किनोसाकी ओन्सेनमा तपाई किन त्यस्तो टहलको आनन्द लिनुहुन्न?
>> किनोसाकी ओन्सेनको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
सार्वजनिक स्नान र र्योकन ओन्सेनबाट स्टीमका साथ बप्पू शहर दृश्यको सुन्दर दृश्य। बेप्पू जापान, ओइटा, क्युशु, जापान मा सबैभन्दा प्रसिद्ध तातो वसन्त रिसोर्ट मध्ये एक हो = शटरस्टक
चिनोइक जिगोोकु बप्पु, जापानमा। "रगत पोखरी नरक", चिनोइक जिगोोकूलाई "रगत पोखरी नरक" भनिन्छ किनकि रातो र clayको माटोबाट बाहिर निस्केको पानीको रातो र =को कारण = शटरस्टक
बेप्पू ओन्सेन क्युशुको पश्चिममा बेप्पू शहरमा अवस्थित तातो स्प्रि forहरूको लागि सामान्य नाम हो। बप्पू शहरमा सयौं तातो स्प्रि .हरू ठूला र सानामा छन्। तातो स्प्रि of्गको टाउको को मात्रा कुल जापान मा सबै भन्दा राम्रो हो भनिन्छ। त्यहाँबाट big ठूला तातो स्प्रि .हरू छन्, प्रत्येक र differentको र color्ग र तातो स्प्रि of्गको गुणस्तर सहित।
बप्पु ओन्सेनमा वर्षेनी लगभग million लाख पर्यटक आउँदछन्। त्यहाँ ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू बस्ने ठाउँहरू छन्। त्यहाँ धेरै मनोरञ्जन सुविधाहरू पनि छन् जस्तै बलिling गल्ली। माथिको दोस्रो चित्रमा देखिएझैं यहाँ दर्शनीय ठाउँहरू छन् जहाँ फलामको पानी भएको चर्को तातो पानी स्क्वायर गरिएको छ, र यो पर्यटकहरूको भीडले भरिएको छ।
बप्पु शहरको कन्नवा जिल्लाको युकेमुरी वेधशालाबाट देखिएको तातो वसन्त क्षेत्रको रातको दृश्य। स्टीम बिभिन्न र colors्गमा प्रज्ज्वलित हुन्छ, र एक उत्तम विश्व फैलन्छ = शटरस्टक
बप्पू शहरमा मैले तपाईंलाई सिफारिश गरेको पर्यटन आकर्षण कन्नवा जिल्लाको युकेमुरी वेधशाला हो। यो अवलोकन डेक जेआर बेप्पू स्टेशनबाट ट्याक्सीबाट करिब २० मिनेटमा अवस्थित छ। यहाँ केवल बेन्चहरू छन्। जे होस्, रातीमा, तपाईं प्रकाशयुक्त स्पा शहरको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, माथिको तस्वीरको रूपमा।
युकेमुरी वेधशालाको नक्सा हो यहाँ.
"ओगीयामा फायर फेस्टिवल" को रात दृश्य, बप्पु, ओइटा प्रान्त, जापान
बेप्पूले अप्रिलको शुरुमा हरेक बर्ष लगभग एक हप्ताको लागि "बप्पू हट्टो ओन्सेन फेस्टिवल" भनिन्छ। यस समयमा, धेरै तातो स्प्रिंग्स नि: शुल्क खुला छन्। थप रूपमा तपाईले माथिको फोटोमा देख्न सक्नुहुनेछ, नजिकैको पहाडहरू जलाउन "ओगीयामा फायर फेस्टिवल" अप्रिल १ मा पनि आयोजित हुनेछ। यो एक घटना हो जुन बोटको विकास सुधार गर्न विरासतमा आएको छ। यदि तपाईं उन्नत मैदानहरू जस्तै युकेमुरी वेधशालामा जानुहुन्छ भने, तपाईंले अवश्य पनि अविस्मरणीय दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ।
बप्पू ओन्सेन साँच्चै ठूलो छ। बप्पू मनोरन्जन तत्वहरूले भरिएको स्पा शहरको एक प्रतिनिधि हो। यसको विपरित, तल युफुइन ओन्सेन र कुरोकावा ओन्सेनसँग विशाल होटल र बलिling गल्लीहरू छैनन्। युफुइन ओन्सेन र कुरोकावा ओन्सेन पहाडका दृश्यहरू हेर्दा ओन्सेनलाई चुपचाप अनुभव गर्न चाहनेहरूको लागि उपयुक्त छन्। चाहे तपाई बप्पू जानुहुन्छ वा युफुइन जस्तो शान्त तातो वसन्त रिसोर्टमा जान चाहानुहुन्छ, कुन रोज्नुहुन्छ?
>> बेप्पू ओन्सेनको आधिकारिक साइट यहाँ छ
युफुइनको ल्यान्डस्केप, जापान = AdobeStock
आउटडोर तातो वसन्त वा युसेफिनमा ओन्सेन, जापान = शटरस्टक
युफुइन एक धेरै लोकप्रिय तातो वसन्त रिसोर्ट हो जुन पश्चिममा अवस्थित बेप्पू शहरबाट by० मिनेट जति कारमा अवस्थित छ। युफुइनले उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको छ, विशेष गरी महिलामा। यस तातो वसन्त रिसोर्टमा न त कुनै ठुलो होटेल छ न मनोरञ्जन जिल्ला। यसको सट्टामा, त्यहाँ सुन्दर प्रकृति दृश्यहरू र साना र्योकन (जापानी शैलीका होटलहरू) छन्। त्यहाँ स muse्ग्रहालयहरू, फेशनेबल पसलहरू र स्वादिष्ट रेस्टुरेन्टहरू छन्।
युफुइनमा व्यक्तिगत रयोकन आकारमा ठूलो हुँदैनन्, तर आवास सुविधाको गुणस्तर जहाँसुकै उच्च छ। बाहिरी स्नान राम्रो छ र खाना स्वादिष्ट छ। यो भन्न सकिन्छ कि युफुइन ओन्सेन एक रिसोर्ट हो जुन थकित दिमाग र शरीरलाई निको पार्छ। Ryokan आवास को दर सामान्य छ। अझै पनि आरक्षण गर्न गाह्रो छ, कृपया जतिसक्दो चाँडो आरक्षण गर्नुहोस्।
>> यफुइन ओन्सेनको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
कुरोकावा ओन्सेनमा तपाई अद्भुत प्राकृतिक सौन्दर्य = शटरस्टक पनि लिन सक्नुहुनेछ
कुरोकावा ओन्सेनको नक्शा
कुरोकावा ओन्सेन मध्य क्युशुको कुमामोटो प्रान्तको एसो क्षेत्रमा एक तातो वसन्त रिसोर्ट हो। युफुइन जस्तै यो पनि धेरै लोकप्रिय तातो वसन्त हो।
कुरोकावा ओन्सेनमा जापानको सुन्दर गाउँको परिदृश्य बाँकी छ। त्यहाँ स्पष्ट Ryokans स्पष्ट स्ट्रिमको वरिपरि पंक्तिबद्ध छन्। धेरै जसो Ryokan एक राम्रो बाहिरी स्नान छ, र जो यो ओन्सेन रिसोर्ट मा रहन्छ तिनीहरूले पनि Ryokan खुला हावा स्नान मा प्रवेश गर्न सक्छन् जहाँ तिनीहरू बसिरहेका छैनन्।
कुरोकावा ओन्सेन र युफुइन तुलना गर्दा कुरुकावा ओन्सेन हिमालहरूमा बढी हुन्छ। यदि तपाई ग्रामीण वातावरणको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने कुरुकावा ओन्सेन राम्रो छ। यद्यपि कुरोकावा ओन्सेनसँग युफुइन भन्दा खराब यातायात छ। थप रूपमा, कुरोकावा ओन्सेन आवास बुक गर्न वास्तवमै गाह्रो छ। यदि तपाईं कुरोकावा ओन्सेनमा जान चाहानुहुन्छ भने, कृपया छिट्टै तयार हुनुहोस्।
यदि तपाईं केही हदसम्म संग्रहालयहरू र पसलहरूको वरिपरि घुम्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाई कुरुकावा ओन्सेनको सट्टा युफुइन जानुहोस्।
>> कुरोकावा ओन्सेनको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
जापानमा, बाँदरहरूले तातो स्प्रि loveहरू पनि मन पराउँछन्!
यदि तपाईंलाई जनावरहरू मनपर्दछ भने, किन तपाईं जापानमा जनावरहरूसँग खेल्न सक्नुहुने दर्शनीय ठाउँहरू भ्रमण गर्नुहुन्न? जापानमा, त्यहाँ उल्लू, बिरालो, खरायो, र मृग जस्ता विभिन्न जनावरहरूसँग खेल्ने ठाउँहरू छन्। यस पृष्ठमा, म ती स्थानहरूमा लोकप्रिय स्थानहरूको परिचय दिनेछु। प्रत्येक नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्, गुगल नक्शा ...